Mazhinji mashandiro ave kuitiswa mumhepo inodzorwa negumbeze remhepo inert kana musanganiswa weiyo inert / inoshanda inodzivirira mashandiro uye kubvisa kudiwa kwekuyerera. Idzi nzira dzave dzakaratidzirwa pane dzakasiyana siyana zvinhu uye chikamu masisitimu kutsiva kana kurumbidza mumhepo muchoto tekinoroji neakakodzera munguva - imwechete chidimbu kuyerera maitiro.
Brazing filler simbi inogona kuuya nenzira dzakasiyana-siyana, maumbirwo, masero uye alloys zvichienderana nevakashandiswa. Ribhoni, zvigadzirwa zve preformed, paste, waya uye preformed washers zvinongova zvishomanana zvemaumbirwo uye mafomu emagetsi anogona kuwanikwa. Chisarudzo chekushandisa shanduro chaiyo uye / kana chimiro chinonyanya kuvimba nezvinhu zvemubereki kuti zvibatanidzwe, kuiswa panguva yekugadzirisa uye nzvimbo yebasa iyo chigadzirwa chekupedzisira chinangwa.
Categories FAQ Tags zvinyorwa zvekutengesa kupisa, kuburitswa kusungurudza mazano, kuburitsa kuburitsa pfungwa, induction soldering mazano Post navigation